Kulan Qiimayn iyo Tafatirid Lagu Samaynayay Buuga Luuqada Af-Somaliga Ee Heer Diploma - Cakaara News
Kulan Qiimayn iyo Tafatirid Lagu Samaynayay Buuga Luuqada Af-Somaliga Ee Heer Diploma
Adhisababa(cakaaranews)Sabti 30ka July 2016. Kulan ay kasooqaybgaleen xubno ka socday xafiisyada iyo kuliyadaha qaarkmida deegaanada dalka islamarkaana qiimayn iyo tafatirid lagu samaynayay buuga 5aad ee barashada cilmiga luuqadaha 7 luuqadood oo ay kamid tahay luuqada af-soomaaliga kana socday huteel Saro-mariam ee magaalada adhis ababa ayaa maanta lasoogaba gabeeyay.
Hadabab, Kulankan oo ay deegaanka uga qaybqaleen khabiiro kasocday xafiiska waxbarashada DDSI iyo qaar kamid ah barayaasha kuliyda macalimiinta ee (Dr C/majiid) ayaa waxaa shabakada wararka ee cakaaranews uga warbixiyay mudane Cabdi Maxamed Xasan (Gurey) khabiirka ABE ee Xafiiska waxbarashada DDSI wuxuuna sheegay in kulankani ahaa mid siwayn loogu qiimeeyay laguna tafatiray mid kamid ah buugaagta barshada luuqada afka-hooyo(af-soomaali) ee heer diploma. Wuxuuna intaa kudaray khabiirku in kulankani uu san ahayn markii koobaad ee uu kaqaybgalo kulan noocan ah islamarkaana ay siwanaagsn u soo gabagabeeyeen waxqabadkii loosoo idmaday.
Dhanka kale waxa isna dhankiisa ka hadlay khabiirka ka socday waaxda horumarinta manhajka cilmi baadhista iyo imtaxaanaadka heer deegaan mudane cabdcasiis maxamed baaruud oo sheegay in uu aad ugu mahadcelinayo diyaariyayaashii iyo qoraayadii buuga isagoo sheegay in iyaguna dhankooda ay si qodo dheer u sameeyeen tafatirka iyo qiimaynta buugan. Wuxuuna xusay in xubnaha kulankan looguwadayeedhay ay ahaayeen 7 qoomiyadood oo dalka ah islamarkaana ay tafatir iyo qiimayn ku samaynayeen luuqadaha kala ah Af-soomaliga, Sidaama, Hadisa, Walayta, Amharik, Tigranya, iyo Afaan-oromo.
Waxaa iyana dhankooda kahadlay diyaariyayaashii buugan luuqada afka hooyo ee heer diploma oo ahaa khabiiro kasocday DDSI islamarkaana mudo bil ah kujiray shaqada diyaarinta oo sheegay inay si fiican ulaqaateen wixii laga saxay iyo fikrdaha lagu soobiiriyay aadna ay ugu mahad celinayaan.
Ugu danbayna waxay sheegeen in ay umahacelinayaan wasaarada waxbarashada JDFI oo soo qaban qaabisay kulankan, iyo xafiiska waxbarshada DDSI gaar ahaan G/Socodka TDP iyo waliba haayada RTI Oo iyana dadaal balaadhan ka gaysatay.